Final Fantasy Battle Royale Apk Khuphela For Android [Umdlalo] -Luso Gamer
Final Fantasy Battle Royale Apk Khuphela For Android [Umdlalo]
Novemba 23, 2021 by John Smith
Kutshanje i-app entsha ye-dabi yokudlala yaziswa kubadlali be-android ebizwa ngokuba yiFinal Fantasy Battle Royale. Apho abadlali banikwe eli thuba likhulu lokulwa kwaye boyise abo bakhuphisana nabo. Abakhuphisana nabo banokuvela ngaphambili ngendlela yezilo kunye neerobhothi ezibulalayo.
Ekuqaleni, umdlalo awukwazanga ukufumana ukuthandwa okuhle phakathi kwabadlali be-android. Nangona kunjalo, ngenkqubela phambili kunye nophuculo ngaphakathi komdlalo. Ngoku abadlali bayakuthanda ukudlala kwaye bathathe inxaxheba ngaphakathi kwibala lokulwa nabahlobo kunye nabanye abadlali.
Khumbula Umdlalo wokulwa utyebile kwiimpawu ezibandakanya izinto ezimangalisayo. Kwaye sithathela ingqalelo umdla wabadlali kunye nemfuno, apha siza kukhankanya zonke iinkcukacha kubandakanya iinketho eziphambili. Ke uyathanda ukuthatha inxaxheba kulo mdlalo wesenzo emva koko ukhuphele i-Apk yamva nje apha.
Yintoni iFinal Fantasy Battle Royale Apk
I-Final Fantasy Battle Royale Android yinkqubo yokudlala ye-intanethi. Apho abadlali ababhalisiweyo banikwe eli thuba likhulu lokulwa neentshaba. Kwaye bazibona bephakathi kwawona majoni anamandla eShinra's Elite.
Amathafa edabi aphenjelelwa zizixhobo eziphezulu ze-octane. Ezo zixhobo zinokulitshabalalisa ngokulula irhamncwa elikhulu ngokudubula nje okukodwa. Nangona kunjalo, izixhobo ezinobungozi ezinjalo zihlelwa kudidi lweprimiyamu. Okuthetha ukuba abadlali bayalelwa ukuba bathenge loo mipu.
Kukho enye indlela yokuvula loo mipu. Olo khetho lufuna ubuchule bokudlala obuphambili kubandakanya ibhenchmarks ezilungileyo ngaphakathi kwedabi. Kuba ukuba uphumelele ukulungelelanisa umlo usebenzisa izakhono zokulwa ezicacileyo. Emva koko unokuvuzwa ngamanqaku amahle kunye nezipho.
Emva kwexesha umdlali unokusebenzisa loo manqaku kunye nemivuzo ukuvula ezinye izinto zepro. Ezibandakanya izikhumba, ii-Emotes, izikhali, iimpembelelo, iindlela kunye nokunye. Ngaphakathi kwibala lokulwa, uMpu, uMelee kunye noMlingo badlala indima ebalulekileyo ekubulaleni abachasi.
igama Final Fantasy Battle Royale
ubungakanani 1.2 GB
umbhekisi SQUARE ENIX Co, Ltd.
Igama lepakheji com.square_enix.android_googleplay.ff7fsww
Iyafuneka i-Android 7.1 kunye noHlanganiso
udidi imidlalo yokuzonwabisa - inyathelo
Khumbula ukoyisa izilo ebaleni kuya kunceda ukutyhala umgangatho wehlabathi. Ngelixa umlo, ukuba nawuphi na umdlali ufumana ubunzima boyisa abo bakhuphisana nabo kubandakanya nezilo ezikhulu. Emva koko uyalelwa ukuba enze umqondiso woncedo kubahlobo.
Nje ukuba amahlakani afumane umqondiso wakho woncedo, aya kuphendula kungekudala kwaye akuncede ngaphakathi emhlabeni. Ngokutsho kwamagosa, lo mdlalo uququzelela iminyhadala eyahlukeneyo kuquka neetumente. Kungoko lonke olu lwazi luya kufikeleleka kudidi lweendaba.
Ukubonisa ukuthatha inxaxheba ngokuthe ngqo ngaphakathi kwezo ziganeko kuya kunceda ukufumana imivuzo eyahlukeneyo kunye namathokheni. Umdlalo unzima kakhulu ngokobunzima kunye nobukhulu. Imizobo equka ingxinano yepixel esetyenziswa apha iphambili kwaye ixinene.
Ubuncinci inguqulelo ye-android yokusebenza kwalo mdlalo ifuna i-7.1 kunye nangaphezulu. Ubuncinci beRam efunekayo xa udlala umdlalo yi-3GB. Ukugqiba usukelo kuya kunceda ukuphuculwa kwezixhobo. Kwanokubulala izilo kuya kunceda ekuxhobiseni izakhono.
Izitayile ezininzi ezahlukeneyo kunye neendlela zongezwa ngaphakathi komdlalo. Ukukhetha nayiphi na indlela kuya kunceda ukuhlola iindawo ezifihliweyo. Ngapha koko, abadlali banokumema abanye abadlali ngaphakathi kwibala lokulwa ukuze bafumane uncedo. Yiyo loo nto ukulungele ukuyidlala nabahlobo emva koko ufake iFinal Fantasy Battle Royale Khuphela.
Uhlelo lokusebenza lokudlala lusimahla ukukhuphela apha.
Ukufakela umdlalo wokudlala kuya kunceda ukunika imeko yemfazwe.
Apho iirobhothi kunye noomatshini be-monster bafumana ulawulo kwindalo yonke.
Ngoku abadlali kufuneka basebenzise izakhono zabo zokulwa ezichanekileyo.
Ukuphelisa ezo zilo kwaye ufumane umvuzo olungileyo.
Ukubulala izilo ezikhulu kuya kunceda ukunyusa umgangatho wehlabathi.
Kwanokulwa namarhamncwa nako kunokunceda ukuphucula izakhono.
Phucula ii-arsenal kwaye ufumane indawo elungileyo.
Ukhetho lokubhalisa lunyanzelekile.
Umdlalo ujongano ulula kwaye unobuhlobo.
Indlela yokukhuphela umdlalo wokugqibela weFantasy Battle Royale
I-app yokudlala ngoku iyafikeleleka kwi-Play Store. Nangona kunjalo, iifayile ze-Apk zokudlala zinokungafikeleleki kwabanye abadlali. Ngenxa yokuba ihlelwa kudidi olunemiqathango. Ngapha koko, abanye abasebenzisi be-android banokufuna iimvume ezininzi zokufikelela kwifayile ye-Apk.
Nangona kunjalo, apha kwiwebhusayithi yethu, zonke ezi zithintelo zisuswa ngokusisigxina. Kwaye abadlali be-android banokukhuphela ngokulula kwaye bafikelele kwifayile ye-Apk yoMdlalo yoqobo ukusuka apha ngokucofa kanye. Ukukhuphela ifayile ye-Apk yomdlalo nceda ucofe kwiqhosha lekhonkco lokukhuphela elinikiweyo.
Usetyenziso lwemidlalo esiluxhasayo kunye nesilunikezelayo apha luqobo. Oku kuthetha ukuba abadlali banokukhuphela kwaye banandiphe amava edabi le-octane ephezulu ngaphandle kwemvume. Khumbula ukuba asinakuze singabanini bamalungelo okukhuphela. Ke ukuba nawuphi na umdlali unengxaki kufuneka aqhagamshelane nenkxaso.
Ininzi yemidlalo eyahlukeneyo yeentshukumo ipapashwe kwaye kwabelwana ngayo apha kwiwebhusayithi yethu. Ukuphonononga ezona midlalo zibalaseleyo nceda ucofe la makhonkco alandelayo. Ezizi I-PUBG Mobile 1.7 Apk kwaye ISenki Boruto Apk.
Yiyo loo nto ulinde ukukhutshwa komdlalo kunye nokukhangela umthombo wokwenene wokufikelela. Khona ulindele ntoni? Khuphela nje inguqulelo yamva nje yeFinal Fantasy Battle Royale ukusuka apha kwaye ukonwabele ukudlala imeko yomlo.
iindidi inyathelo, imidlalo yokuzonwabisa tags Umdlalo wokulwa, Final Fantasy Battle Royale, Final Fantasy Battle Royale Apk, Final Fantasy Battle Royale Khuphela, Umdlalo wokugqibela weFantasy War Royale Post yokukhangela
I-VVIP yonwabele i-apk yokukhuphela ye-Android [MLBB Mod]
Abaqhubi belori baseYurophu 3 Apk Khuphela kwi-Android [Umdlalo]